Ny Airbus sy ny Air Lease Corporation dia nanangana hetsika vaovao ho an'ny Tahirim-bola an-tapitrisa dolara
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ny Airbus sy ny Air Lease Corporation dia nanangana hetsika vaovao ho an'ny Tahirim-bola an-tapitrisa dolara
Airbus and Air Lease Corporation (ALC) dia manomboka hetsika famatsiam-bola ESG mitentina an-tapitrisa dolara izay hitondra anjara biriky amin'ny fampiasam-bola amin'ny tetik'asa fampivoarana fiaramanidina maharitra izay hosokafana amin'ny ho avy ho an'ny mpandray anjara maro avy amin'ny fiaraha-monina fanofana fiaramanidina sy famatsiam-bola ary mihoatra.
Ny Air Lease Corporation dia nanao sonia Letter of Intent mandrakotra ny fianakaviana Airbus rehetra, manasongadina ny herin'ny vokatra fenon'ny orinasa. Ny fifanarahana dia ho an'ny 25 A220-300s, 55 A321neos, 20 A321XLRs, A330neos efatra ary misy A350Fs fito. Ny baiko izay ho tapitra amin'ny volana ho avy, dia mahatonga ny ALC miorina any Los Angeles ho iray amin'ireo mpanjifa Airbus lehibe indrindra ary lessor miaraka amin'ny boky baiko A220 lehibe indrindra. Niorina tamin'ny 2010, ny ALC dia nanafatra fiaramanidina Airbus 496 hatramin'izao.
"Ity fanambarana didy vaovao ity dia ny fiafaran'ny asa mafy sy ny fanoloran-tena nandritra ny volana maro nataon'ireo fikambanana roa ireo mba hanamafisana sy hanitsiana tsara ny habeny sy ny habaka amin'ity fifampiraharahana fiaramanidina lehibe ity manoloana ny fitomboan'ny fitakian'ny zotram-piaramanidina manerantany amin'ny fanavaozana ny fiaramanidina fiaramanidina amin'ny alàlan'ny ALC. fampanofana, ”hoy i Steven F Udvar-Hazy, filoha mpanatanteraka ny Air Lease Corporation. "Taorian'ny fifampidinihana lava sy amin'ny antsipiriany miaraka amin'ireo mpanjifanay stratejika stratejika eran'izao tontolo izao, dia mifantoka amin'ity lamina feno ity amin'ny karazana fiaramanidina tiana indrindra sy ilaina indrindra izahay, mandrakotra ny fianakaviana A220, A321neo, A330neo ary A350. ALC dia mpitarika tsena iraisam-pirenena amin'ny tsirairay amin'ireo sokajy ireo amin'ny filaharan'ny vokatra Airbus maoderina indrindra. Ireo fanampim-pananana fiaramanidina teknolojia vaovao mandritra ny taona maro amin'ny portfolio-n'ny ALC dia mamela antsika hampitombo ny fidiram-bola sy ny tombom-barotra ary hanome fahafaham-po ny mpanjifantsika amin'ny zotram-piaramanidina.
Nanampy i Udvar-Hazy hoe: “ALC no mpanjifa natomboka ho an'ny dikan-teny A321LR sy XLR tena malaza. Ankehitriny, lasa lessor fanombohana ho an'ny A350F izahay ary mpanjifa mpanofa lehibe indrindra ho an'ny A220. Nanana vina izahay ho mpandray voalohany amin'ny A321 ary resy lahatra fa nanao safidy tsara indray izahay tamin'ny A220 sy A350F, mamaly izay hitantsika fa ilain'ny tsena amin'ny vanim-potoana fanarenana. Ho fanampin'izay dia tena mafana fo izahay nanao sonia fiaraha-miasa ho an'ny tahirim-bola maharitra izay hitondra anjara biriky amin'ny hoavy maitso ho an'ny indostriantsika. "
“Miaraka amin'ity baiko lehibe ity, dia manasongadina ny fahatokisanay izahay tsy amin'ny hoavy matanjaka sy ny fitomboan'ny fitaterana an'habakabaka ara-barotra manerantany, fa amin'ny maodely fandraharahan'ny ALC, amin'ny fanapahan-kevitra momba ny fividianana fiaramanidina manokana, anisan'izany ny A350 Freighter vaovao, ary farany. amin'ny fomba fijery lavitr'ezaka fa ny fanafarana fiaramanidina vaovao dia fampiasam-bola tsara indrindra ho an'ny renivohitra tompon-tany," hoy i John Plueger, Tale Jeneralin'ny Air Lease Corporation sy Filoha. "Ankoatra izany, izahay sy Airbus dia manambara ny hetsika voalohany miaraka amin'ny ESG amin'ny fividianana fiaramanidina amin'ny alàlan'ny famoronana tahirim-bola an-tapitrisa dolara ho an'ny tetik'asa fampivoarana fiaramanidina maharitra izay manakiana ny ho avy".
“Fampandrenesana lehibe ho an'ny Airbus amin'ny taona 2021 ity. Ny baikon'ny ALC dia manambara fa mandroso mihoatra ny doldrums Covid isika. Miaraka amin'ny fijerena mialoha, ny ALC dia manamafy ny portfolio-ny baikony ho an'ireo karazana fiaramanidina irina indrindra rehefa mivoaka ny krizy isika ary indrindra indrindra, nahita ny sanda lehibe entin'ny A350F amin'ny tsenan'ny entana. Ny fankatoavan'ny ALC dia manamafy ny hafanam-pon'izao tontolo izao hitanay amin'ity fisondrotan'isa eo amin'ny habakabaka fitaterana entana ity ary midera ny fahalalany amin'ny fisafidianana azy sy amin'ny fandreseny ny olona rehetra hatrany amin'ny tsipika fahatongavana izahay amin'ny fanambaran'ny baiko A350F voalohany. Fanampin'izay dia nanaiky izahay ny hanao ny vina maharitra momba ny fiaramanidina ho ampahany amin'ity fifanarahana ity izay laharam-pahamehana ho anay roa, ”hoy i Christian Scherer, Lehiben'ny varotra Airbus ary lehiben'ny Airbus International.
Ny A220 no hany tanjona amin'ny fiaramanidina namboarina ho an'ny tsenan'ny seza 100-150 izay manome angovo 25% tsara kokoa tsy azo resena * ary miaraka amin'ny fampiononana ny mpandeha amin'ny fiaramanidina tokana. Ny Fianakaviana A321 izay misy ny dikan-teny XLR miaraka amin'ny halavirana 4,700nm ary 30% ny fanjifana solika ambany kokoa * miaraka amin'ny A330neo dia mpiara-miombon'antoka tsara indrindra ho an'ny antsoina hoe afovoan'ny tsena. Ny A350F, miorina amin'ny mpitarika lavitra maoderina indrindra eran'izao tontolo izao dia natao ho an'ny fampandehanana entana manolotra fandoroana solika 20% farafahakeliny noho ny fifaninanana ary ilay hany fiaramanidina mpitatitra entana vaovao vonona amin'ny fenitry ny famoahana CO2027 ICAO 2.
*mihoatra ny fiaramanidina mpifaninana amin'ny taranaka teo aloha